Shiinaha Oo Sheegtay Inay Diyaarisay Daawada Talaalka COVID 19
Wednesday September 16, 2020 - 09:24:45 in Wararka by Burco Office 2
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in daawooyinka talaalka ay soo saareen ay hadda marayaan heerkii ugu danbeeyey ee tijaabada, isla markaana rajeenayaan in daawada isticmaalkeeda guud la bilaabo bisha November ama December sannadkan 2020.
4 daawo oo talaalka looga hortago cudurka Covid 19 ayey soo saareen saddex shirkadood oo ku yaalla waddanka China oo kala ah; Sinopharm, Sinovac Biotech iyo CanSino Biologics.
Mid kamid ah Talaalkan ayey dowlada China bilowday isticmaalkeeda oo loo fasaxay askarta dowlada China bishii Luulyo.
Shirkadaha Caalamiga ah ee soo saara daawooyinka ayaa bilihii lasoo dhaafay ku tartamayey sidii loo heli lahaa daawada talaalka Covid 19 oo xiligan baahi weyn loo qabo, cudurkan ayey tan iyo intuu dillaacay dhammaadkii sannadkii hore u dhinteen in ku dhaw 1 milyan oo qof. Cudurkan ayaa dadka uu hadda ku dhacay gaadhayaan in ku dhaw 30 milyan oo caalamka ku kala nool.
Shirkadaha reer Galbeedka ayaa iyagu laftooda wada tijaabinta daawooyinka Talaalka oo ay sheegeen in heer gebo gebo ah marayo, walow reer Galbeedka ay ka digeen in la dadajiyo nidaamka soo saarista daawooyinka oo keeni karta halis kale oo dhanka caafimaadka ah.
Waxaa dhawaan la hakiyey tijaabada ay waday Shirkada AstraZeneca oo ay leeyihiin UK iyo Sweden oo sameynta daawada Talaalka Covid19 la kaashaneysay Jaamacada Oxford, kadib markii uu xanuunsaday qof kamid ah kumanaanka qof ee lagu tijaabinayey daawadan, baadhitaankaasi oo hadda socda sidii lagu xaqiijin lahaa in talaalkan aanu waxyeelo u geysan karin dadka caafimaadka qaba iyo kuwa kale ee daawooyinka kale isticmaala.